प्रकाशित मिति: Feb 19, 2019 12:31 PM | ७ फागुन २०७५
ब्याजको स्प्रेडमा खतिवडाले सच्च्याएको नीति राष्ट्र बैंकले उल्टायो, स्प्रेड १% कम हुने को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
Karunakar Nepali[ 2019-02-24 12:23:39 ]
केहि स्वार्थी ब्यापारी को मतलब पुरा गर्न राष्ट्र बैंक ले हचुवा निर्णय लिएको छ। केहि मान्छे कराउंदैमा दिर्घ कालीन असर पर्ने काम गर्नु हुन्थेन। ब्याज दर घटाओ भनि कराउने ब्यापारीहरु वास्तवमा नकच्चरा नै हुन्। खुला बजार अर्थतन्त्र भन्ने अनि सधै सस्तो ब्याज मात्र खोज्ने? ऋणको ब्याज सस्तो गर्न निक्षेपको पनि घटाउनु पर्छ। त्यसो गर्दा बैंकमा पैसा राख्ने लाइ मर्का पर्छ। ब्याज आम्दानीको आकर्षण नहुने भए पछि पैसा बैंकमा राख्नुको सट्टा फजुल खर्ची बढ्ने र त्यसै घाटामा गएको अर्थतन्त्र झन् तहस नहस हुन्छ। महंगी झन बढ्छ। ब्यापारीलाई त के छ र झन् सामान बढी बिक्छ, फाइदै हुन्छ तर राष्ट्रिय नोक्सानी बढ्न जान्छ। विदेशी मुद्रा संचिति घट्छ। सरकारले कृषिमा अनुदान दिएकै छ बरु उर्जा लगायत केहि राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा ब्याज अनुदान दिने, संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गर्ने जस्ता उपाय अपनाउनु पर्छ। तर यिनीहरुको लहै लहैमा सरकार लाग्नु भनेको गम्भीर भूल साबित हुनेछ। अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा ब्यापारीले गर्ने नाफा भनेको एकलौटी गोजीमा हाल्ने नाफा हो जुन एकदमै अपारदर्शी हुन्छ। तर बैंकले गर्ने नाफा भनेको पारदर्शी मात्र हैन लाखौं शेयर होल्डरको पनि हो। बैंकले खरबौं रुपियाको जिम्मा लिएर १, २ अरब नाफा राख्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। संसारभरिकै प्रचलन हो यो। बरु सरकारी पुजीगत खर्च बढाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ तरलता ढाउनु पर्यो। पुरै प्रणालीमा आएको अस्वस्थ अवस्था केवल ब्याज घटाएर मात्रै समाधान हुदैन। यति कुरा त विद्वानहरुले सजिलै बुझ्नु पर्ने हो!!